Kuthekani ukuba idola liwa kabukhali? | Ezezimali
Kuthekani ukuba idola liwa kabukhali?
Esinye seziphumo zemigaqo-nkqubo yezoqoqosho nezemali yomongameli omtsha waseMelika, uDonald Trump, kukuba imali yayo, oko kukuthi, idola yaseMelika, inokuhla kwiinyanga ezizayo. Ngaphezulu, abahlalutyi abaninzi baya kude ngokuqikelela ukuba le yinyani yokwenyani yokuba abatyali mali abancinci nabaphakathi kuya kufuneka bathembele ekwenzeni ipotifoliyo yotyalo-mali. Ukufikelela kwinqanaba eliza kuchaza ukubuya kwakho.
Kungenxa yokuba, idola ebuthathaka ineziphumo ezininzi, hayi kuqoqosho ngokubanzi, kodwa nakwimidla yakho njengomtyali mali. Ayiphelelanga ekuthengeni nasekuthengiseni isitokhwe kwizabelo, ukuba akukho njalo kwezinye iimarike zezemali. Ezinye zezona zintsusa, njengalezo zesinyithi ezixabisekileyo. Nangona, ewe, iya kuba yimali apho baya kuthi bakubone ukutshintsha-tshintsha kweenguqu phakathi kwezezimali ekuvunyelwene ngazo ngabaqhubi.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba kuya kwenzeka ntoni kwiimarike nge ukubuyisa idolaAkukho nto ingcono kunezinye iingcebiso eziya kukunceda uhambise imisebenzi yakho ngesiqinisekiso esikhulu sempumelelo. Ayisiyiyo imeko eyinyani, kodwa isenokuba yeyona yenzekayo. Ngayiphi na imeko, iya kukuzisela amathuba amashishini amatsha, amanye awo ngokuqinisekileyo anomdla kwaye ngendlela ethile enobuchule. Ukusuka kwiimarike ezikhulayo ukuya kolunye utyalomali. Ngamafutshane, iindlela ezintsha zotyalo-mali zivulelekile kuwe ukusukela ngoku.
1 Idola: ngaba iyachaphazela ukuthengisa?
2 Amazwe avelayo anokunyuka
3 Ukuzivelela kwemali yaseMntla Melika
4 Abanye abaphumeleleyo beedola eziphantsi
5 Ukusebenza kwiimarike zemali
Idola: ngaba iyachaphazela ukuthengisa?
Imeko yemali yaseMntla Melika xa inyuka iza kuthetha utshintsho olukhulu kwisicwangciso sakho sotyalo-mali kwasekuqaleni. Kuya kuba lixesha elifanelekileyo lokuvala izikhundla kwezinye zazo kwaye zivule kwabanye. Kungenxa yokuba, amanqanaba okunyanzelwa aya kwahluka ngamandla. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba ibingalwamkeli utyalomali lwakho, ukusukela ngoku kuya kuba njalo. Kuya kufuneka ubonise ubungqongqo obukhulu ukuqikelela imicimbi kwaye ngale ndlela unokwenza ngayo ukonga kwakho inzuzo kunye namandla amakhulu.
Kuba ukuba idola liwa kabukhali, kuyakuba lixesha lokuba ujonge kwiimarike ezikhulayo. Esinye sezindululo ezicebisayo, nangona sinomngcipheko othile, sisekwe ekwandiseni ukubonakaliswa kwakho kwizabelo zaseRussia. Kubonakala ngathi inokuba njalo enye yezinto ezimangalisayo Lo msebenzi mtsha wentengiso yemasheya. Akumangalisi ukuba ezona zikhombisi ziphambili zoqoqosho zibonisa oku. Ukufikelela kwinqanaba lokuba ibe lixesha lokuba uqale le meko intsha kubudlelwane bakho nehlabathi lemali ngokusebenza kwakho kokuqala.
Enye yezibakala ezixhasa olu khetho lutsha kutyalo mali kukuba Ixabiso leoyile izakuqhubeka inyuka ngalo nyaka. Ngaphandle kwamandla angaqhelekanga, njengoko abanye abahlalutyi abadumileyo beemarike zezemali bevuma. Kwimeko apho, iya kuluthanda uqoqosho lweSlavic ngenxa yokuxhomekeka kakhulu kwigolide emnyama. Apho imarike yemasheya yaseRussia inokuyithatha le meko intsha yoqoqosho olukhulu ngokunyuka okunamandla. Ngenxa yoku, unokuvula izikhundla kule marike yamashishini alinganayo.
La Uqoqosho lwaseRussia Kubetha ulindelo lwabahlalutyi, ukuwa kwe-0,5% bekulindelwe kwaye ekugqibeleni bekuyi -0,2% kwaye kulindeleke ukukhula kulo nyaka. Ezi datha zixhasa imeko enokuthi ibe yenye yeeasethi zemali ukuba ziqwalaselwe kulo nyaka. Ngobukho bokwenyani ekuphononongeni kwakhona kunye nokukhula okubaluleke kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iimarike zesiko.
Amazwe avelayo anokunyuka
Ayisiyiyo iRussia kuphela isizwe esinokuxhamla kule meko yoqoqosho intsha. Kwakhona amanye amazwe asahlumayo anobunzima obuthile kwibhodi yezoqoqosho yamanye amazwe. Enye yazo ngaphandle kwamathandabuzo Brasil, ukuba ifezekisa uzinzo kwinkqubo yayo yezopolitiko. Ngophononongo olunokubakho oluphezulu kakhulu nangaphezulu okuboniswe zezinye iimarike zentengiso. Yenye indawo apho ukonga kwakho kunokujoliswa kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Ababobungozi ekuvezweni okwenziwa ngokusesikweni ukusukela ngoku.
Olunye uqoqosho lwamazwe aphesheya olunokuthi lisebenzise eli thuba lubandakanya ezinye ezivela kuMazantsi mpuma Asiya kunye ngakumbi ngakumbi ama-Latin latin. Banokukunika ngaphezulu kwesothuso esihle kwezi zihlandlo. Kananjalo awunakulibala malunga nemarike yemasheya eIndiya, ethe iinyanga ezininzi yafumana enye yezona nzuzo zibalaseleyo kwizabelo kwihlabathi. Ngaphezulu kweemarike ezinkulu zestokhwe ezisezingqondweni zabatyali mali abakhulu.
Ukuzivelela kwemali yaseMntla Melika
Zonke ezi ndlela zotyalo-mali zinokwenzeka nanini na xa olu nxibelelaniso lwemikhosi lwenziwa phakathi kweemali ezihamba phambili zeodolo yezemali yamanye amazwe. Kuba ngokwenyani, yonke into ibonakala ngathi iya kwelo cala. Ukuya kwinqanaba lokuba yonke into ibonisa ukuba idola iya kuqhubeka nokuhla kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Ngotshintsho kwipotfoliyo yotyalo-mali ekufuneka uyenzile ukusukela ngoku.
Ngale ndlela, imarike yemali iya kuba yenye yeeasethi zemali ekufuneka unike ingqalelo kuzo kwiiveki ezizayo okanye kwiinyanga ezizayo. Iya kubonisa umsebenzi ongaphezulu kwesiqhelo. Ngaphezulu kokungazinzi okuphawulekayo okuya kukuvuyela kubathengisi. Ukuba ungomnye wabo, Siyavuyisana nawe kuba kuvulwa ixesha elitsha eligcwele ziimvakalelo ezinamandla kunye neenketho ezintle zokwenza imisebenzi yakho ibe yinzuzo kule marike yezemali yokufaneleka.
Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, kuya kufuneka ukhawuleze kakhulu ukwenze okusesikweni kwiimarike zezemali. Ngokutshintshiselana nezinye iimali ezifanelekileyo ngokukodwa: I-franc yaseSwitzerland, iponti yaseBritane okanye i-euro uqobo. Ngenxa yezi zenzo, uya kuba nakho ukwenza naluphi na uhlobo lwesindululo. Ukusuka kweyona ndawo indala ukuya kweyona inamandla kwiimarike zemali. Ewe awuyi kuba nemida kwiindlela zakho.
Abanye abaphumeleleyo beedola eziphantsi
Ngayiphi na imeko, ukuhla okuqhubekayo kwimali yaseMelika kuzisa abanye abaphumeleleyo xa kuziwa kwiimpahla zezemali apho unokutyala imali oyigcinileyo. Intengiso ye i zinyithi Iya kuba yenye yazo kwaye inikezelwe phantsi kwezindululo ezahlukeneyo zotyalo-mali. Ukusuka kwigolide yesiko ukuya kwezinye izinyithi ezingaqhelekanga, ezinje ngesilivere okanye ipalladium. Zenziwe njengenye yeendlela onazo ukusukela ngoku ukuya kwimeko entsha yedola.
Enye yezinto eziphambili iboniswa lixabiso leoyile kwiimarike. Kungenxa yokuba ngokungathandabuzekiyo iya kuba yenye yeempahla zexabiso ezinokufumana uxabiso olukhulu kwezi nyanga zilishumi elinesibini zizayo. Nokuba kunokwenzeka ukusondela nkqu nokuba ugqithise isithintelo se- $ 70 umphanda. Akumangalisi ukuba yenye yezabaxhamli abakhulu bokuhla kwemali yaseMelika. Ngobudlelwane obuthe ngqo phakathi kwezi ndlela zombini.
Kananjalo awunakulibala ukuba kunokwenzeka ntoni kwezinye izinto ezingekenziwa. Ngokukodwa ezo zinxibelelene nokutya okuphambili kwaye unokuzinika ngaphezulu kovuyo olunye ukuba uvula izikhundla ngalo mzuzu. Nangona kunjalo, baya kufuna ulwazi olukhulu kunye olunzulu lweemarike zabo zezemali. Ukongeza, kuya kufuna ukuba unyuse utyalomali lwakho kwimveliso ezahluke ngokupheleleyo kunalezo ubuzisebenzisa ukuza kuthi ga ngoku.
Ukusebenza kwiimarike zemali
Ewe kunjalo, amathuba amatsha ayavula ukwenza ukuba ukonga kwakho kunenzuzo. Ezinye ziya kuba ngaphezulu okanye ngaphantsi ziqhelekile, kodwa ezinye ngokuqinisekileyo ziya kuqala kwiindlela ezininzi zotyalo mali. Ke ngale ndlela, usesikhundleni esingcono sokunyusa ukunyakaza kwihlabathi liphela lemali. Ngokusekwe kwezi zenzo zilandelayo sikubhengeza apha ngezantsi.
Kuya kufuneka wenze eyakho uqikelelo lokuqala kwiimarike zemali. Umsebenzi wayo uya kuba kumanqanaba angaphezu kwesiqhelo. Nangona uhlala phantsi kweendlela zotyalo-mali ezithobekileyo. Njengokuncedisa kutyalo-mali lwakho lwesiqhelo kwiimarike zezabelo.
Los Iimarike ezizezinye iya kuba ngamanye amaziko apho kuya kufuneka ujonge ukubeka imali yakho. Unezindululo ezaneleyo ukwanelisa ibango lakho, kwanakwezona mpahla zinqabileyo zinokubonakala ngathi okwangoku.
Ukuqhubekeka ezantsi kwixabiso ledola yaseMelika kufuneka kuyenze tshintsha ipotifoliyo kwezinye iindlela ezahlukeneyo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba kufuneka ubuyisele lonke utyalo-mali obukade unalo kude kube ngoku.
Kwezinye iimali zotyalo-mali, kunye nokukhusela utyalomali lwakho, awuzukukhetha ngaphandle koku gubungela imisebenzi yakho ngemali ekuvunyelwene ngayo, kule meko yi-euro. Isicwangciso esisebenzayo kakhulu kwezi zihlandlo.
Lumka kakhulu iimveliso zezemali eziphucukileyo. Kuya kufuneka uyazi ukuba usebenza njani nabo kwimeko ekhethekileyo njengale, nedola ngokuqhubekekayo ukulungisa izikhundla zayo. Kuphela ukuba unamava onokuthi uvule izikhundla kwezi modeli zokonga.
Awunakukhetha ngaphandle kokujonga iiasethi eziyimali zicatshulwe kwiidola okanye kwii-euro. Kuba ngokuxhomekeke kolu tshintsho lubalulekileyo, baya kutyekela ngakumbi ekwamkeleni umceli mngeni webango lakho elitsha. Njengomzekelo wale meko, izinyithi ezixabisekileyo zihlala zidweliswa kweyokuqala. Iya kuba ngumqondiso omncinci malunga nento ekufuneka uyenzile ngemali yakho.
Kwaye okokugqibela, ungathandabuzi ukwandisa kwezo marike zezimali le ndlela yemali yaseMelika iluncedo ngakumbi. Ayisiyiyo kuphela evelayo, kodwa nezinye ngaphezulu kwezikwere ezingaqhelekanga de kube ngoku ubungakhange ucinge ngokungena kuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Kuthekani ukuba idola liwa kabukhali?
Utyalo-mali kwigolide okanye kwidijithali yemali edijithali yokugcina imali ukuxhasa utyalo-mali kugcino lwexesha elizayo.
Eyona Ndleko yeeBhanki
Ukutyala imali kwiibhondi zengingqi: enye indlela yokonga